यी हुन् अंग्रेजी वर्ष २०१५ मा बढी पढिएका समाचार ! - Hamrokhotang
Home » Photo Gallary » Serofero » यी हुन् अंग्रेजी वर्ष २०१५ मा बढी पढिएका समाचार !
यी हुन् अंग्रेजी वर्ष २०१५ मा बढी पढिएका समाचार !
काठमाडौं पुस । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१५ विदाईको अन्तिम संघारमा छ । शुक्रबारदेखि अंग्रेजी वर्ष २०१६ ले पाइला टेक्नेछ । यो वर्षभरी हाम्रोखोटाङ डटकममा बढी पढिएका समाचार कस्ता रहे त ? हेरौं बढी पढिएका टप समाचार:
महुरे–फोक्सिङ्टार सडक खुलेको समाचार यो वर्ष धेरै पढिएको समाचार मध्ये पहिलो नम्बरमा रह्यो । फेब्रुअरी १८ मा यो समाचार पोष्ट गरिएको थियो । सगरमाथा हाई–वे अन्तरगत खोटाङको नुनथलास्थित महुरेदेखि लिच्कीराम्चेसम्मको ४९ किलोमिटर सडक उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । पूरा समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
धेरै पढिएको समाचारको दोस्रो स्थानमा ६३ वर्षपछि नातीद्धारा बाजेको चिहान फेला शिर्षकको समाचार रहेको छ । सुन्दा आश्चर्यजनक समाचार भएकाले धेरै पढिएको हुनसक्छ । नोभेम्बर ३ मा समाचार पोष्ट गरिएको थियो ।
प्रेमीले दिएको गर्भ फाल्ने औषधी खाएपछि... शिर्षकको समाचार तेस्रो नम्बरमा धेरै पढिएको छ । असुरक्षित गर्भपतन गराएकी खोटाङ बुइपा–४ की १५ वर्षीया सुनिता राईको चार महिनापछि मृत्यु भएको थियो । समाचार अगस्ट २३ मा पोष्ट गरिएको थियो ।
यस्तै, चौथो नम्बरमा धेरै पढिने समाचारमा खोटाङमा बस पल्टिएर सात जना घाइते भएको रहेको छ ।
पाँचौ नम्बरमा वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको क्षतिबारेको रहेको छ । भूकम्पले जिल्लामा दुई सय बढी विस्थापित बनेका थिए । देशभरी भने ९ हजार बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।
यसैगरी, छैटौं नम्बरमा बढी पढिने समाचार धनको सट्टा लास आएपछि ‘ललु’ र बुबाआमा मुर्छित शिर्षकको समाचार रहेको छ । यो समाचार विदेशमा धन कमाउन गएको सम्बन्धि नाटकमा आधारित हो ।
यस्तै सातौंमा भूकम्प सम्बन्धी नै समाचार बढी पढियो । बिनासकारी भूकम्पमा खोटाङका १२ जनाको मृत्यु शिर्षकको समाचार सातौँ स्थानमा बढी पढिएको छ । शिक्षा तथा रोजगारका सिलसिलामा राजधानी काठमाडौं सिन्धुपाल्चोक लगायतका ठाउँमा पुगेका १२ जिल्लाबासीको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै, खोलामा आएको बाढीमा परी खोटाङमा आमाछोरी बेपत्ताको समाचार आठौं स्थानमा बढी पढियो भने भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको खोटाङ दुबेकोल–१ स्थित जन्मे–हुर्केको तथा पढे–लेखेको घर सम्बन्धी भाटभटेनी भन्दा भब्य लाग्छ शिर्षकको फोटो बढी हेरिएको छ ।
नयाँ वर्ष २०१६ को हाम्रोखोटाङ डटकम परिवारको सबैमा शुभकामना ।